Home top Archives - Page4of4- Hamro Samachar
२०७७ जेष्ठ २४, शनिबार ०३:२८२०७७ जेष्ठ २४, शनिबार ०३:२८ By हाम्रो समाचारNo Comments
–हाम्रो समाचार– नेपालगन्ज । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व राज्यमन्त्री दिनेशचन्द्र यादवले बाँकेको नरैनापुरमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिको परिवारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ । नरैनापुर गाउँपालिका ५ स्थित मृतकको घरमा पुगेर परिवारसँग भेटघाट गरी उहाँले जीवनयापनको लागि दीर्घकालिन सहयोगको लागि आफुले प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । कमाई गर्ने व्यक्तिको कोरोनाबाट ज्यान गएपछि अहिले परिवारको दैनिक जिविकोपार्जनमा कठिनाई भईरहेको स्थानीय अगुवा केशवराम यादवले बताउनुभयो । भूमि आयोगका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका नेता यादवले शुक्रवार बाँकेको कोरोना अतिप्रभावित नरैनापुर गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका क्वारेन्टिन र विद्युतीकरणको अनुगमन समेत गर्नुभएको छ । उक्त क्रममा उहाँले कोरोना भाइरस जो सुकै व्यक्तिलाई पनि सर्न सक्ने भएकोले सङ्क्रमित भएका र निको भए...
२०७७ जेष्ठ २२, बिहीबार १३:५५२०७७ जेष्ठ २२, बिहीबार १३:५५ By हाम्रो समाचारNo Comments
Home top, बाँके, राजनीति, शिक्षा, समाचार, स्वास्थ्य
–चन्द्र बोहरा–नेपालगञ्ज । नेपालगञ्जस्थित एच.सी.आर.सी. अस्पताल तथा कप्तान कृषि फर्मका अध्यक्ष डा.कुमारशान शाहले आफ्नो छोरोको जन्मदिनका अवसरमा तीन जना अति बिपन्न दलित तथा पूर्ण शारीरिक अपाङ्ग व्यक्तिलाई आवास निर्माणमा सहयोग गर्नुभएको छ । नेपालञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २० का अध्यक्ष कृष्ण कार्कीको अनुरोधमा गायत्रीनगर नयाँवस्तीमा बसोबास गर्ने सुकुम्वासी अति बिपन्न दलित तथा पूर्ण शारीरिक अपाङ्गता रहेका गलसाकुमारी कामी, मानकुमारी नेपाली र रामसिला कामीलाई आवास निर्माणमा सहयोगको लागि २५ हजारका दरले ७५ हजार रुपैया डा. शाहले आज एक समारोहका बीच प्रदान गर्नुभएको हो । छोरा शोर्णजङ्ग शाहको जन्मदिनको अवसर पारेर स्थानीय गाउँको बिपत्तीमा अस्पताल र कृषि फार्मको तर्फबाट सहयोग गर्ने मौका पाएकोमा खुशी लागेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, कोहि ठुलोबडो भन्ने नसोच्नु होस, यस ठाऊमा बस्ने हामी सबै एक हौ पर...
२०७७ जेष्ठ २२, बिहीबार ११:१६२०७७ जेष्ठ २२, बिहीबार ११:१६ By हाम्रो समाचारNo Comments
–हाम्रो समाचार–नेपालगन्ज । बाँकेको जानकी गाउँपालिकामा पहिलो पटक ४० जना कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका छन् । भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको पिसिआर प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा जानकी गाउँपालिका वडा नं. १ का ४० जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो । सङ्क्रमितहरु सबै १५ देखि ३२ वर्षीय युवा रहेका छन् ।बाँकेमा आजै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ र १५ मा एक–एक जना गरी दुईजना सङ्क्रमित थपिएका छन् । यो सहित बाँकेमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई सय ५५ पुगेको छ । गत वैशाख १९ गते पहिलो पटक बाँकेको नेपालगञ्जमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो । नेपालगञ्जबाट शुरु भएको सङ्क्रमणको क्रम नरैनापुर, खजुरा, राप्तीसोनारी, डुडुवा,बैजनाथ हुँदै जानकी गाउँपालिकासम्म फैलिन पुगेको छ । ...
२०७७ जेष्ठ १९, सोमबार ११:१५२०७७ जेष्ठ १९, सोमबार ११:१५ By हाम्रो समाचारNo Comments
Home top, बाँके, शिक्षा, समाचार, स्वास्थ्य
–हाम्रो समाचार–नेपालगन्ज । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा आज थप सात जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ । भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको पीसीआर प्रयोगशालामा गरिएक परीक्षणमा डुडुवा गाउँपालिका वडा नं. २ का १८,२६, ३५ बर्षीय, वडा नं. ३ का १७, १९, २६, बर्षीय र वडा नं. ४ का १८ बर्षीय गरी ७ जना मा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, डुडुवा गाउँपालिकामा मात्रै सङ्क्रमितको सङ्ख्या २५ पुगेको छ । यो सँगै बाँके जिल्लाको सङ्क्रमित सङख्या १९६ पुगेको छ । पीसीआर विधिबाट गरिएको कोरोना परीक्षणमा आज मुलुकभर थप २२६ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।नेपालमा सङ्क्रमित सङ्ख्या एकहजार ७९८ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । पुरूष २१३ र महिला १३ सङ्क...
२०७७ जेष्ठ १९, सोमबार ०१:५२२०७७ जेष्ठ १९, सोमबार ०१:५२ By हाम्रो समाचारNo Comments
–हाम्रो समाचार–नेपालगन्ज । भारतबाट फर्किएका नागरिकलाई घर पु¥याउँदै गरेको हायस मिनीबस गएराती बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकास्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा रोकिराखेको टङकसँग ठोक्किदा १२ जनाको मृत्यु भएको छ । नेपालगञ्जदेखि सल्यान जाँदै गरेको ना ५ ख ५९९५ नम्बरको हायस मिनिबस रोकिराखेको बा४ख ९०६४ नम्बरको ट्रकमा गएराती करिब १२ बजे ठोक्किएको थियो । दुर्घटनामा ११ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियोे भने एकजनाको भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिका –२ ठुरिया जङ्गलमा भएको दुर्घटनामा बसमा सवार अन्य २१ यात्रु घाइते हुनुभएको छ । बसमा ३३ जना सवार रहनुभएको प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेहरुको भेरी अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ । मृत्यु भएका १२ जनाकै शव भेरी अस्पतालमा राखिएको छ । उनीहरुको सनाखतको काम भैरहेको छ । ...
२०७७ जेष्ठ १७, शनिबार १५:४३२०७७ जेष्ठ १७, शनिबार १५:४३ By हाम्रो समाचार1 Comment
–हाम्रो समाचार– काठमाडौं । सरकारले जेठ मसान्तसम्म लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । शनिबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो । बैठकले आन्तरिक र अन्तराष्ट्रिय हवाई उडान र सिमा नाका असार १६ गतेसम्म बन्द गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । पछिल्लो पटक थपेको लकडाउनको समय यही जेठ २० गते सकिदैछ । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषदले लकडाउन लम्बाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले विदेशमा अलपत्र रहेका नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा ल्याउने कार्ययोजना पनि स्वीकृत गरेको छ । विदेशमा अलपत्र रहेका नेपालीले उनीहरु रहेको देशस्थित नेपाली दुतावासमा नाम दर्ता गराउनु पर्नेछ । त्यसपछि उद्दार गरेर ल्याइएकाहरूलाई काठमाडौंका होटलमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेपछि मात्र आ–आफ्नो जिल्ला पठाउने योजना रहेको छ । ...
२०७७ जेष्ठ १७, शनिबार १४:०६२०७७ जेष्ठ १७, शनिबार १४:०६ By हाम्रो समाचारNo Comments
Home top, शिक्षा, समाचार, स्वास्थ्य
–हाम्रो समाचार– नेपालगन्ज । दैलेखको बिद्युत प्राधिकारण क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएका एकजनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ । दैलेखमा मृत्यु भएको एकजना सहित नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ७ पुगेको छ । दुल्लु नगरपालिका–११ का ३५ वर्षीय पुरुषको विहान मृत्यु भएपनि दिउँसो मात्र उनको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा। लक्ष्मी नारायण तिवारीले दैलेखमा मृत्यु भएका युवकको कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ आएको जानकारी दिनुभयो । दैलेखको दुल्लु नगरपालिकामा रहेको क्वारेन्टाइनमा चिया पिएर हिँड्दै गर्दा अचानक ढलेका उनको मृत्यु भएको थियो । भारतबाट आएका ३५ वर्षीय ती युवा दुल्लु नगरपालिका ११ का बासिन्दा हुन् । ती युवा भारतबाट १० दिनअघि नेपाल आएका थिए । ...
२०७७ जेष्ठ १७, शनिबार ११:३१२०७७ जेष्ठ १७, शनिबार ११:३१ By हाम्रो समाचारNo Comments
–हाम्रो समाचार–नेपालगन्ज। नेपालमा कोरोना भाइरस सङक्रमितको सङ्ख्या बढेर १४०१ पुगेको छ । शनिवार १८९ जना थपिएसँगै देशभर सङ्क्रमितको सङख्या १४०१ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । शनिवार भेटिएका १८९ जना सङक्रमितमध्ये १८५ जना पुरुष रहेका छन् भने ४ जना महिला रहेको प्रवक्ता देवकोटले बताउनुभयो । बाँकेमा कोरोनाबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ भने १८१ जना सङ्क्रमित रहेका छन् । ...
२०७७ जेष्ठ १६, शुक्रबार ११:३९२०७७ जेष्ठ १६, शुक्रबार ११:३९ By हाम्रो समाचारNo Comments
हाम्रो समाचारनेपालगन्ज, जेठ १६ । बाँकेमा आज फेरि १० जना सङ्क्रमित थपिएका छन् । यो सँगै बाँकेमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या १८१ पुगेको छ । भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा गरिएको परिक्षणमा डुडुवा गाउँपालिकाका १७ देखि ४१ वर्षका १० जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकेमा हालसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या १ सय ८१ पुगेको छ । यी मध्ये २७ जना निको भएर घर फर्केका छन् । आजमात्रै नरैनापुरका तीनजना दाङ स्थित आइसोलेशन अस्पतालमा निको भएर घर फर्किदैछन । नरैनापुरमा एक जनाको भने मृत्यु भइसकेको छ । देशभर आज थप १ सय ७० जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । यो सँगै देशभर कुल संक्रमित १ हजार २ सय १२ पुगेका छन् । २ सय ६ जना निको भएर घर फर्कंदा ६ जनाको मृत्युु भइसकेको छ । ...